Fikarohana momba ny firaisana Fahatsiarovana ny tantaram-piainan'ny zaza tantaram-pirazanana ao amin'ny tantaran'ny Rashid Khaddege | Daniel Jurdi - Fikarohana momba ny vatana teraka
Daniel Jurdi mitazona ny fiainany taloha momba ny fiainana
Fomba fiaina: Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany
From: Old Souls nataon'i Tom Shroder
Article by: Walter Semkiw, MD avy amin'ny ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera
Maty i Rashid Taorian'ny namelezan'i Ibrahim fiara iray
Rashid Khaddege dia mpamboatra fiara izay niaina tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Kfarmatta (antsoina hoe fur-mat-ta), any Libanona. Rashid dia teraka tao 1943. Raha 25 izy, tao 1968 dia nisy namana iray nantsoina hoe Ibrahim nisambotra azy mba handeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ibrahim dia nitsidika ny Ranomasina Mediterane ary tany amin'ny toerana iray antsoina hoe Military Beach, tsy naharesy ny fiara i Ibrahim. Navoaka avy tao anaty fiara i Rashid, niteraka tra-boina, ary novonoina avy hatrany.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Malahelo kely i Daniel miantso an'i Ibrahim sy Naim, ny fiainany taloha
Herintaona taty aoriana dia teraka i Daniel Jurdi. I Yusuf Jurdi no rainy ary Latifeh reniny. Ny teny voalohany nataon'i Daniela dia hoe "Ibrahim." Taminy roa taona, dia nilaza tamin'ny reniny Latifeh izy hoe: "Te-hody aho." Nandritra ny roa sy sasany, nanao fanambarana i Daniel hoe: "Tsy ity no tranoko. Tsy ianao no reniko. Tsy manana ray aho. Maty ny raiko. "Nahatsiaro ny renin'i Daniel hoe:" Tsy niantso an'i dadan'i Yusuf izy. "" Niantso azy tamin'ny anarany "izy. Hoy koa i Daniel:" Naima ra i Naima. "I Naim no rain'i Rashid Khaddege. (1)
Nandritra ny roa taona sy tapany taonany, ny havana dia nanandrana nanonona ny anaran'ny tanàna Kfarmatta. Niditra an-tsehatra i Daniel ary nanonona ny anaran'ilay tanàna. Rehefa nanontany ny fomba nahafantarany ny anaran'ilay tanàna i Dada, dia namaly i Daniel hoe: "Avy any Kfarmatta aho." (2)
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Nahatsiaro ny maty tao amin'ny Beach militaire i Daniel
Rehefa nandeha fiaramanidina tao Beyrouth i Daniel sy ny reniny, dia nandalo ny toerana teo amoron-dranomasina antsoina hoe Military Beach. Nanakimpy ny masony i Daniela ka niafina tamin'ny tanany ary nitomany. Avy eo dia nikiakiaka izy hoe: "Io no nahafatesako." Araka ny efa nambara, io toerana io tao amin'ny Military Beach dia tena nahafaty an'i Rashid Khaddege. (3)
Nanazava koa i Daniel fa teo amin'ny fiainany teo aloha dia mpanamboatra milina izy. Mikasika ilay loza dia nilaza i Daniel fa haingana i Ibrahim ary tsy naharesy intsony ny fiara. Daniel dia niteny hoe: "Nivoaka ny fiara aho ary nitaingina ny lohako." Rehefa nanampy nanampy ireo naratra i Daniel dia nilaza fa naheno olona iray niteny izy hoe: "Avelao ity iray ity, maty izy." (4)
Fitondran-tena taloha: Daniel Pinches & Propositions ny mpampianatra sekolin-jaza
Tao amin'ny sekolin'ny garderie, nilaza tamin'ireo mpampianatra i Rashid Khaddege ny anarany. Tamin'ny tranga hafa tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, i Daniel dia nanozona mpampianatra tanora iray mahafinaritra ary nanao fanamarihana manokana. Daniel, toy ny ankizy, dia nitovy tahaka ny olon-dehibe Rashid.
Nandefasan'ny ray aman-drenin'i Daniel ny olom-pantany tamin'i Kfarmatta, tamin'ny farany, mba hanadihady olona iray mamaritra ny filazan'i Daniel momba ny mekanika iray maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tao Military Beach. Nandre momba ilay tantara ireo Khadeges ary nitsidika an'i Daniel.
Fantatr'i Daniel ny fiainany taloha Rahavavy Najla, ny sakaizany taloha Ibrahim & Jijad & Mbola tiany ny akondro, sakafo ankafizin'ny fiainana taloha
Rehefa nanadihady ireo fianakaviana roa tao amin'ny 1979 i Ian Stevenson dia samy nilaza izy ireo fa tamin'ny fotoana voalohany nahafantaran'i Daniel dia nanamarika avy hatrany ny anabavin'i Rashid, Najla, ary niantso azy tamin'ny anarany. Rehefa nihaona ireo fianakaviana, dia nilaza tamin-dreniny i Neny mba hitondra akondro ho an'ireo vahiny. Nihinana akondro i Rashid ary ny reniny sy ny anabaviny dia tsy nijanona ny akondro taorian'ny nahafatesany, satria ny akondro dia nampahatsiahy azy ireo ny fahaverezan'ny Rashid. Taty aoriana, nandritra ny fitsidihana an'i Kfarmatta, dia nahafantatra an'i Ibrahim ihany koa i Daniel, ary koa Jijad, mpihaza mpihaza an'i Rashid.
Ny fianakaviana Khaddege dia mitazona alika kely amin'ny fiainany andavanandro, ry zalahy Daniel
Ny fianakavian'i Rashid dia nanaiky an'i Daniel ho zanany lahy tamin'ny fiainany taloha. Manana sary azy ao an-tranony izy ireo ary mitazona fandriana ho an'i Daniel, izay mitsidika in-roa na roa volana isam-bolana. Nanambady i Daniel ary miasa ho mpikirakira.
Fiainan'i Daniel Fiainana taloha amin'ny fiara haingana
Manana karazana fiara mandresy i Daniel, izay mampiseho ny traikefa ara-tsaina nataon'i Rashid nandritra ny fianjeran'ny miaramila Beach.
Ao amin'ny sary omena etsy ambony, Daniel Jurdi dia mitazona ny sarin'ny fiainany manokana taloha, avy amin'i Rashid Khaddege. Tsindrio eo amin'ny sary mba hampitatra sy ny bokotra arrow izay hivezivezy eo amin'ny sary. Toy ny tamin'ny raharaha Suzanne Ghanem, izay nokarohin'i Ian Stevenson, MD, dia hita fa misy fitoviana ara-batana matanjaka. Ireo tranga Stevenson ireo dia manohana ny toe-javatra hoe ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny fombam-piainana dia mety tsy hifanaraka amin'ny iray hafa.
Ity toe-javatra tena mahavariana momba ny vatana vaovao ity dia mampiseho ireo endri-javatra manaraka:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra
Tsara ny manamarika fa ian Stevenson dia nianatra voalohany an'i Daniel tany Libanona tao 1979, fony i Daniel dia 10 taona. Naveriny indray tao amin'ny 1998 i Daniel raha nandeha tany Libanona niaraka tamin'i Tom Schroder, mpanao gazety niaraka tamin'ny Washington Post, izay nanoratra boky momba an'i Stevenson. Tao amin'ny 1998, Daniel dia 29 taona ankehitriny ary tamin'izay fotoana izay no nahafantaran'i Stevenson fa manana endri-javatra mitovy amin'i Rashid ihany i Daniel. Ity fandinihana ity dia mampiseho fa manohy manangona porofo vaovao isika mikasika ny tranga izay efa niato nandritra ny am-polo taona.
Tranga Amerikana iray izay ahitana sary miaina mandritra ny androm-piainana roa izay mampiseho mampiseho amin'ny endriny ara-batana:
Trangam-panjakan'izao tontolo izao any James Huston Jr. | James Leininger
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Ny fianakavian'i Daniel taloha, ny Khaddeges, dia nanaiky azy ho i Reasharnation Rashid ary nitazona fandriana ho azy izy ireo mba hijanonany miaraka amin'izy ireo.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Nanana tahotra ny fiara mifindrafindra i Daniel, izay toa miseho avy amin'ny fahafatesany taloha tahaka an'i Rashid Khaddege izay maty tamin'ny fiarabe fiara.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Tadidio fa tsaroany fa rehefa avy navoaka tao anaty fiara izy, dia nisy olona iray tonga nanampy ireo niharam-boina hoe: "Avelao ity iray ity, efa maty izy." (Ny dikan'ny hoe fahatsiarovan-tena dia midika fa i Daniela dia afaka nitory nitranga taorian'ny nahafatesan'i Rashid.
Fanamarihana hoan'ny mpamaky: Ian Stevenson. MD, dia profesora momba ny Psychiatrie ao amin'ny Oniversiten'i Virginia izay nanoratra tamim-pahaizana tena izy, satria mpahay siansa ny mpihaino azy. Ao amin'ny tranokalan'ny vohikala Reincarnation, ny tranga niainany taloha dia aseho tantaram-piainan'ny zaza ao amin'ny vatana vaovao mba hanamora ny fahatakarany ny asany akademika. Ho an'ireo izay liana amin'ny fankasitrahana ny fikarohana ara-tsiansa, toy ny fampiasany vavolombelona marobe mba hametrahana fijoroana vavolombelona voamarina, azafady, azafady ny tatitra voalazan'ny Dr. Ian Stevenson.
1. Shroder, Tom: Old Souls, Fireside / Simon sy Schuster, NY, NY, 2001, p. 74